Computer System တွေ၊ Telecommunications တွေနဲ့ Digital Technology တွေ .. စတဲ့ ခေတ်ဘက်ကို ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ Data နဲ့ Applications အသုံးပြုမှုတွေဟာ Business တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ အရမ်းကိုအရေးပါလာပါတယ်။ ‍‍‍‍‍‍
Business တွေရဲ့ Operation တွေဟာလဲ Digitalized ဖြစ်လာပြီး Application တွေဟာ Business တွေရဲ့ အဓိကမောင်းနှင်အားတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Applications တွေကို Run နိုင်ဖို့ Serverတွေ Storage တွေပိုမိုလိုအပ်လာပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ Virtual Machine တွေ အသွင်ပြောင်းလာပါတယ်။ ( Virtualization Content တွင်ဖတ်နိုင်ပါတယ် ) ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Virtual Machine တွေကို Servers တွေပေါ်မှာ တည်ဆောက်လေ့ရှိတယ်။ အဲ့ဒီလို…
1️⃣ Servers တွေ၊
2️⃣ သူတို့တွေ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ Server တွေ မှာရှိတဲ့ Applications တင် Run ထားတဲ့ VM(Virtual Machine) တွေကို Users တွေ လှမ်းလုပ်နိုင်ဖို့ Network Connection တွေ၊
3️⃣ Data တွေ လုံခြုံမှုရှိစေရန် Security Device တွေ၊
4️⃣ ဒါ့အပြင် Power Supply တွေ၊ လေအေးပေးစက်တွေ၊ အရေးပေါ် မီးသတ် ပစ္စည်းတွေ၊ .. အစရှိသဖြင့် Device တွေ ကို အဆောက်အဦးတစ်ခုနဲ့ လုံခြုံစွာထားပြီး Facilities ကောင်းကောင်းပေးကာ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာကို Data Center လို့ခေါ်ကြတယ်။ ဒီနေရာမှာ Data Center အကြောင်း အကျဉ်းချုပ်သာရှိပါသေးတယ်။ ( အကျယ်ကို Data Center Content တွေမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ် ) .. တကယ်ပြောချင်တဲ့ Disaster Recovery Topic ကို မရောက်သေးပါ။‍‍‍‍‍‍
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ Organization အကြီးအကဲတွေမှာ အမြဲတမ်း Business Continuity Plan ဆိုတာ ရှိကြပါတယ်။Business တွေရဲ့ အဓိကမောင်းနှင်အားတွေဖြစ်လာတဲ့ Computerize System တွေ Applications တွေ Downtime မရှိအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အလုံးစုံရှိနေတဲ့ Data Center ကြီး တစ်ခုခုကြောင့် ပျက်ဆီးခဲ့ရင် Business တစ်ခုလုံး ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (Down) သွားနိုင်ပါတယ်။ ‍‍‍‍‍‍
Data Center ကြီး တစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမှာ လူတွေရဲ့ အမှားကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- မီးလောင်သွားခြင်း၊ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့်ပျက်စီးခြင်း၊ ရေလွှမ်းသွားခြင်း၊ အစရှိသဖြင့် ဖြစ်သွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုဆက်ပြီး Run မလဲဆိုတဲ့ Backup Plan ရှိရပါမယ်။ ပထမ Data Center တည်ရှိရာ တစ်နေရာရာမှာ Disaster တွေဖြစ်လာရင် နောက်တစ်နေရာကနေ အလိုလို Recover ပြန်ယူနိုင်ပြီး Business Impact မရှိအောင် လုပ်ရပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့် DR(Disaster Recover) Solution ရယ်လို့ ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။‍‍‍‍‍‍
DR Solution တွေထဲမှ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့ Secondary Data Center ရှိထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ‍‍‍‍‍‍
Primary Data Center မှာရှိနေတဲ့ Data တွေပျက်စီးသွားရင် ပြန်ရနိုင်ဖို့ကို Backup Solution တွေနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရမှာဖြစ်ပြီး ( Backup Solution Content တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ) Data Center ကြီးတစ်ခုလုံးကို Backup ယူတဲ့ အခါကြတော့ Disaster Recover(DR) Solution ဟု ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။‍‍‍‍‍‍
Data Center မှာ Run နေတဲ့ Application တွေ ရဲ့ Data တွေ ကို Secondary DC (တစ်နည်း DR site) ဘက်ဆီကို အမြဲ Sync လုပ်ပြီး Data တွေပို့နေရမည်ဖြစ်သည်။ DC တစ်ခုခု ဖြစ်ခဲ့သော် ထို Sync လုပ်ထားသော Data တွေနဲ့ DR က ဆက် Run နေမည်ဖြစ်သည်။‍‍‍‍‍‍
DR Solution စတော့မည်ဆိုလျှင် စဉ်းစားစရာများစွာရှိပါတယ်။အခြေခံအားဖြင့် RPO, RTO ကို ထည့်စဉ်းစားကြပါတယ်။ RPO နှင့် RTO ရဲ့ ခြားနားချက်ကို ဆက်လက်ရှင်းပြပါမယ်။ ‍‍‍‍‍‍
Recovery Point Objective (RPO) ဆိုသည်မှာ Actual Data Loss ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်နှင့် Data Back up ရှိနေတဲ့ အချိန်ကွာဟချက်ဖြစ်တယ်။ Data Loss အများဆုံးဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာပေါ့။ ဆိုလိုတာက Data တွေ DR Site ကို Replicate လုပ်နေချိန်က Real Time လား? ၅ မိနစ်ခြားလား? အစရှိသဖြင့် Data Sync လုပ်တဲ့ အချိနိ ကို စဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်။ Real Time Sync လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ DC က Data တွေကို DR ဆီသို့ အဆက်မပြတ် Continuously ပို့နေတာဖြစ်တာ။ Real Time Sync လုပ်နေရင် Data Loss က Zero ဖြစ်မှာပါ။ Each5Minutes မှ Sync လုပ်နေရင် Data Loss က အများဆုံး ၅ မိနစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Recovery Time Object (RTO) ဆိုသည်မှာ Actual Recovery Period ဖြစ်တယ်။ DR Site အနေနဲ့ ပြန် Run နိုင်ဖို့ ကြာနိုင်တဲ့ အချိန်ကာလ တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ့် Organization ရဲ့ အသုံးပြုထားတဲ့ Applications Nature ပေါ် မူတည်တာဖြစ်ပါတယ်။ ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်လဲဖြစ်နိုင်သလို ၁၀ စက္ကန့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။‍‍‍‍‍‍
Banking System အကြီးကြီးတွေ Enterprise Business အကြီးကြီးတွေမှာ DR Plan and Solution မရှိဘဲ Run နေရင် ဒီ Business မှာ Impacts တွေ များနေသလို မှားယွင်းစွာ Run နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ တစ်ချို့ Organization တွေကျတော့လဲ DR တော့ ရှိပါတယ်။ သို့သော် DC နဲ့ တစ်နေရာထဲ တွဲပြီး Run နေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်လဲ ဒီ Solution က လုံးဝမှားနေပါတယ်။ သဘာဝဘေးအန္တရယ်တွေနှင့် Electricity ပြဿနာတွေက DC ရော DR ရောပါ impact ဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ ‍‍‍‍‍‍
အခုအခါမှာတော့ DR Solution ကို On-Premise မှာ ထားနိုင်သလို Cloud Solution ကို အသုံးပြုပြီး Cloud တစ်နေရာမှာ ထားရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါလဲ Effective ဖြစ်တဲ့ Solution တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။‍‍‍‍‍‍
ဒါဆိုရင် DR Solution တစ်ခုစ ပြီဆိုရင် ဘာတွေ စစဉ်းစားရမလဲ ဆိုတာကို ဆက်လက် လေ့လာကြည့်ပါမယ်..‍‍‍‍‍‍
➡ အရေးကြီးဆုံးကတော့ RPO နဲ့ RTO ကိုအကောင်းဆုံး Provide ပေးနိုင်တဲ့ Solution ကိုပဲရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
➡ Primary DC Site နဲ့ Secondary DR Site ရဲ့ အကွာအဝေးကို သိရမယ်။အကွာအဝေးအရမ်းနီးနေလျင် Disaster ဖြစ်ရင် DC ရော DR ရော တစ်ခါထဲ အဖြစ်ခံနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
➡ နောက်တစ်ခု လိုက်နာရမှာကတော့ DR Solution ရှိပြီဆိုရင် အမြဲတမ်း အနည်းဆုံး ၆လ တစ်ကြိမ် Drill DR Test) စမ်းနေဖို့လိုပါတယ်။
➡ ဒါမှ တစ်ကယ် Disaster ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အမှန်တကယ် Recover ဖြစ်ရဲ့လားသိနိုင်ပါတယ်။
➡ DR Solution အတွက် Security ကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ Physical Security ရော IT Security ရော ကောင်းဖို့လိုပါတယ်။
‍‍‍‍‍‍အရေးကြီးတာကတော့ RPO နဲ့ RTO ကိုအကောင်းဆုံး Provide ပေးနိုင်တဲ့ Solution ကိုပဲရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။‍‍‍‍‍‍
ဒါကြောင့် အစဦးဆုံး Solution Provider ရွေးထဲက အကောင်းဆုံး ဘက်ပေါင်းစုံက ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် Solution ပေးနိုင်တဲ့ Vendor ကိုရွေးနိုင် ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။‍‍‍‍‍‍
DR Solution မှာ On-Premise ပဲသွားမလား? Cloud နဲ့ပဲသွားမလား? NEX4 က provide ပေးနိုင်တဲ့ Solution Option တွေရှိပါတယ်။ NEX4 အနေနဲ့ Customers တွေရဲ့ Organization နဲ့ အသင့်တော်ဆုံး Solution ကို Consultant လုပ်ပေးပြီး Servicesတွေ ကို Managed လုပ်ပေးနေပါတယ်။‍‍‍‍‍‍